Tag: teny maro fiteny | Martech Zone
Tag: wordpress maro fiteny
WPML: Adikao ny tranokalanao WordPress amin'ity Plugin Multilanguage ity sy serivisy fandikan-teny tsy voatery
Talata, Novambra 24, 2020 Talata, Novambra 24, 2020 Douglas Karr
WPML no fenitra amin'ny indostria amin'ny fampivoarana sy fandikana ny atiny amin'ny tranonkala WordPress misy fiteny maro. Mandeha ny plugin GTranslate aho izao Martech Zone hahafahana manao fandikanteny milina tsotra sy fiteny maro. Nanitatra ny zava-bitantsika manerantany ary koa ny fivezivezena ny motera fikarohana mankany amin'ny tranokalako. Izahay dia miasa amin'ny famoahana tranonkala ho an'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao izay manana mponina Hispanika manan-danja. Raha toa ny plugin toa ny GTranslate